Ọ bụ kwe m omume naghachi faịlụ site Freecom mpụga ike mbanye?
Usoro Freecom mpụga ike mbanye Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Gịnị mere Ị Pụrụ Naghachi Lost / ehichapụ / formatted / mebiri emebi Data si Freecom Drive
1 Ọ bụ kwe m omume naghachi faịlụ site Freecom mpụga ike mbanye?
My 250GB Freecom mpụga ike mbanye-akwụsị ịrụ ọrụ na mberede. M ka pụrụ ịhụ ya na disk management ma m nwere ike ịnweta ya. Mgbe ọ bụla m na-agbalị na-emeghe ya, usoro na-agwa m na ọ bụ ihe ghara ịdị irè ọnọdụ. Ugbu a, m na-aga idozi ya na a ọrụ center. M maara m niile data na ya nwere ike wepụrụ mgbe ahụ. Ya mere, ebe ọ bụ na m mbanye ike ka a ghọtara site na kọmputa, bụ n'ebe a ngwọta maka m ka m ga-esi m data azụ? Daalụ nke ukwuu.
Nke a bụ ezigbo ajụjụ na azịza bụ nnọọ ee! Ọ bụ usoro njehie na-eme ka gị Freecom mpụga ike mbanye keerughi. N'ezie faịlụ ndị ka na gị mbanye, na i nwere ike effortlessly weghachite ha na enyemaka nke a Freecom mpụga ike mbanye data mgbake usoro.
Mgbe data na gị Freecom mpụga ike mbanye na-efu n'ihi nhichapụ, formatting, nrụrụ aka, usoro njehie ma ọ bụ ọbụna virus agha, i nwere ike iri Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac dị ka a na-agbalị. Nke a dị ike ngwá ọrụ na-enyere gị iji naghachi furu efu faịlụ na nanị ole na ole dị mfe na n'ihe ize ndụ-free arụmọrụ. Kasị ịtụnanya atụmatụ nke usoro ihe omume bụ na ọ na-akwado ndị na mgbake nke niile faịlụ na ụdị, gụnyere videos, ihe oyiyi, ọdịyo faịlụ, akwụkwọ, wdg Plus, ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Freecom ike mbanye na USB flash mbanye kwa.
Biko download a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery naghachi data si Freecom mpụga ike mbanye ugbu a.
2 Usoro Freecom mpụga ike mbanye Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
M ga-eji Wondershare Data Recovery maka Windows naghachi furu efu faịlụ site na Freecom mpụga ike mbanye. Ọ bụrụ na ị nwere Mac, ị nwere ike weghachite gị Freecom mpụga ike mbanye data na yiri nzọụkwụ na Mac version.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode naghachi data si Freecom mpụga ike mbanye
Ị ga-3 mgbake ụdịdị ịhọrọ site na mgbe wụnye na launching usoro ihe omume na kọmputa gị.
Ka na-"Echefuola File Iweghachite" dị ka a mbụ na-agbalị naghachi furu efu, ehichapụ, formatted ma ọ bụ merụọ faịlụ site na Freecom mpụga ike mbanye.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Freecom mpụga ike mbanye
Mgbe ahụ, ị ​​na mkpa iji họrọ gị Freecom mpụga ike mbanye na pịa "Malite" bọtịnụ na window na-amalite ịgụ isiokwu furu efu faịlụ na ya.
Cheta na: Biko hụ na gị na Freecom mbanye nwere ike ghọtara dị ka a disk site na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3 Naghachi faịlụ site na Freecom mpụga ike mbanye
Mgbe scanning, hụrụ data na gị Freecom mpụga ike mbanye niile ga-depụtara na window. Ị nwere ike ele faịlụ aha ego otú ọtụtụ nke furu efu faịlụ nwere ike natara site gị Freecom mpụga ike mbanye.
N'ikpeazụ, ị nwere ike nye akara faịlụ gị mkpa na iti on "Naghachi" iji naputa ha si gị Freecom mpụga ike mbanye na-azọpụta ha na kọmputa gị.
3 Gịnị mere Ị Pụrụ Naghachi Lost / ehichapụ / formatted / mebiri emebi Data si Freecom Drive
N'ihi na furu efu / ehichapụ / formatted / mebiri emebi data bụ ka gị na Freecom mpụga ike mbanye na ọ bụ naanị akara dị ka keerughi data site usoro. Ọ ga-okụrede ruo mgbe ebighị ebi naanị mgbe ọ na-overwritten site ọhụrụ data. Nke a pụtara na ị pụrụ ịkwụsị iji gị mbanye na anya n'ihi na a usoro dị ka Wondershare Data Recovery iji weghachite ya.
> Resource> Naghachi> Olee otú iji Igosi Freecom mpụga ike mbanye Data Recovery